ယူရိုလောင်းကစား ၂၀၂၁ / Kerry Packer / 1Xbet/ ကာစီနို သတင်းများ / လှည့်ကွက် များ နှင့် အကြံပြုချက်များ
Kerry Packer အလွန့်အလွန် လောင်းကစားခြင်းသည် လောင်းကစားရုံတစ်ခုကို ပျက်စီးစေသည်။လောင်းကစားပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခြင်းသည် သင့်ကံ‌ကောင်းမှုအပေါ် အများဆုံးမူတည်သည်။ အကယ်လို့ ချမ်းသာပြီးသား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် သည် ငွေ နှင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာ များများ ပိုရနိုင်တာက အံ့သြစရာ မကောင်းပါဘူး လောင်းကစား အလွန်ခုံမင်သော ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် များထဲ မှ တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည့် သြစတြေး လျ စီးပွားရေးသမား Kerry Packer ကို ကြည့် လိုက်ပါ
Kerry Packer သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ Las Vegas တွင်ရှိစဉ်
သူသည် Las Vegas ရှိနာမည်ကြီးသော Blackjack ကစားသမားတစ် ဦး အနေနှင့်သူ၏လောင်းကစားအားကိုးမှုကြောင့်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာက Packer သည်လောင်းကစားနယ်ပယ်တွင်အမှန်တကယ်ပညာရှင်ဆန်နေသည်ဟုထင်သည်။ ယူရို ၂၀၂၁ လောင်းခြင်း၊ Packer သည် Blackjack နှင့် baccarat ကစားစဉ် MGM Grand Casino တွင်အမေရိကန် ၂၄ သန်းနှင့်အမေရိကန် ၃၃ သန်းအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
အံ့သြစရာကောင်းတာက Packer ဟာအနိုင်ရလို့ MGM Grand ဒေဝါလီခံသွားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်လောင်းကစားကြီးများပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည့်လောင်းကစားရုံ၀န်ထမ်းများစွာသည်ချက်ချင်းပင်ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရသည်။ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးဘီလျံနာတစ် ဦး ဖြစ်သည့်လောင်းကစားစားပွဲဝိုင်း Kerry Packer ၏ကိုးကားချက်နှင့်အခြားအရင်းအမြစ်များစွာ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအကြောင်းဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်က သြစတြေးလျနိုင်ငံက အချမ်းသာဆုံး လူ ပုဂ္ဂိုလ်
လောင်းကစားသမား အများစုသည်ကြွယ်ဝရန်အတွက်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများတွင်ကံကောင်းခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းများရှာဖွေနေကြသည်။ ယေဘုံ ယျ အားဖြင့်ကစားသမားများနှင့်မတူဘဲ Kerry Packer သည်စီးပွားရေးသမားတစ် ဦး ဖြစ်သောကြောင့်ခြွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Packer သည် သူ၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး မီဒီယာ အင်ပါယာကို တည် ထောင်ခဲ့ ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ် သူ၏ ကျောက်ကပ်ရောဂါ နှင့် မသေဆုံးခင် အချိန်ထိ သြစတြေးလျ တွင် အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုင် တစ် ဦးဖြစ်ခဲ့သည်
Packer သည်သူ၏ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့်မီဒီယာအင်ပါယာအပြင်လောင်းကစားသမားအဖြစ်လူသိများသည်။ သူသည် blackjack ,ဖဲ ချပ် , ကိုးမီး ဂိမ်း နှင့်အခြားသော ဂိမ်း ကတ်များ ကစားခြင်းတွင် ကျော်ကြားသည် ဒါပေမဲ့ Packer အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းက blackjack ဖြစ်ပြီး အဲ့ဂိမ်း မှာ သူရဲ့ ပုံပြင် တွေ ရှိခဲ့တာကြောင့်ဖြစ် တယ်
လောင်းကစား အလွန်အကျွံ လောင်းခြင်းဖြင့် လောင်းကစားရုံကို ဒေဝါလီခံအောင် မည်သို့ ပြုလုပ််နိုင်သနည်း?
လောင်းကစားရုံ များရှိကစားသမားများသည် Kerry Packer ကိုအမြဲကြောက်ကြသည်။ သူသည် ကောက်ကျစ် ယုတ်မာ တဲ့ သူ မဟုတ်ပေမဲ့ အလောင်းကစား ပမာဏ တော်တော်လေး အစွန်း‌ရောက်သည် သြစတြေးလျရှိ အကြီးဆုံး မီဒီယာ သူဌေးကြီး သည် ကာစီနိုဝိုင်း တွင် လောင်းကြေး များနှင့် ဒေဝါလီ ခံ သည် ထိ ကစားခြင်း (သို့) တစ်နှစ်ပတ်လုံး အရှူံးသမား ဖြစ်သည် အထိ လုပ်နိုင်သည်
သို့သော်သူအမြဲတမ်းတွက်ချက်သည်လောင်းကစားရှိသည့်လောင်းကစားရုံသည် ၀န်ထမ်းအချို့ကသူ့ကိုဆက်မကစားမချင်းဒေဝါလီခံရမည်မဟုတ်ဟုတွက်ချက်သည်။ တစ်ကြိမ်တွင် Packer သည် Bellagio ကာစီနိုလောင်းကစားပွဲတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၂၀ ဆုံးရှုံးခဲ့သည်, Las Vegas.
လောင်းကစားရုံကိုဒေဝါလီခံ ရ အောင် လုပ်သည်
Packer သည်ရှုံးနိမ့်မှုများစွာကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သော်လည်းသူသည်အောင်ပွဲများစွာရရှိခဲ့သည်။ Aspinalls ကလပ်လန်ဒန်လောင်းကစားဝိုင်းသည် Packer သည် Blackjack ဂိမ်းမှငွေအမြောက်အများရရှိပြီးသည့်နောက်တွင်၎င်း၏လုပ်ငန်းများကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။ နောက်တစ်ကြိမ်တွင် Packer သည် Blackjack နှင့်baccaratကစားစဉ် MGM Grand မှအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၄ သန်းမှ ၃၃ သန်းအထိရရှိခဲ့သည်။
ထူးခြားသည်မှာ Packer သည် MGM Grand Casino ကိုဒေဝါလီခံရန်လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ပြီးသူ၏ ၀ န်ထမ်းအချို့သည်သူ့ကိုအလွန်များပြားသောအလောင်းအစားများပေးသောကြောင့်အလုပ်ထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ယခုအချိန်အထိယူရို ၂၀၂၁ လောင်းခြင်းတွင်အလွန်များပြားသော Packers များတွင်အနိုင်ရပြီးရှုံးနိူင်သည့် Blackjack Player မရှိသေးပါ။ သူကပြဇာတ်တစ်ခုတည်း၌အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀၀ နှင့်အထက်အထိလောင်းနိုင်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။